R/Wasaaraha oo soo gabagabeeyay socdaalkii uu ku tagay Gaalkacyo, kulana la qaatay wefdi sare oo ka socda Midowga Yurub – Radio Daljir
Muqdisho, March 28 -Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Gaas iyo wefdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta ka soo laabtay safar saddex cisho qaatay oo uu ku tegay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaasoo uu uga qeybgalay aaska madaxweynihii hore Marxuum C/llaahi Yuusuf Axmed.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa intii joogay magaalada Gaalkacyo waxa uu kulamo la qaatay madaxda maamulka Puntland oo uu ugu horeeyo madaxweyne Dr. C/raxmaan Faroole iyo Wasiiro, sidoo kale waxa uu la kulmay ururada haweenka gobolka Mudug iyo waxgarad kale.
Ra?iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda Federaalka KMG ah Mudane Sheekh Sharif ayaa waxa ay intii ay joogeen Gaalkacyo booqdeen magaalada Gaalkacyo dhanka maamulka Galmudug isaga oo kulamo la qaatay madaxda maamulkaasi wuxuuna shirkiisan jaraa?id ku sheegay in dowladda KMG ahi ay aad u soo dhoweyneyso nabadda iyo maamul wanaaga ka jira degaanadaasi ee maamulada Puntland iyo Galmudug isaga oo ku ammaanay sida ay nabadda u sugeen isla markaana ula dagaalameen Burcad badeed iyo Argagixisada.
Ra?iisul Wasaare Dr. Cabdiweli ayaa faah faahiyay shir uu uga qeybgalay Gaalkacyo isaga iyo wefdigiisa kaasoo looga hadlayo dhameystirka iyo dhaqangelinta qorshaha Roadmap-ka wuxuuna tibaaxay inuu si wanaagsan ku soo dhamaaday isla markaana ay soo baxeen qodobo muhiim ah habsami u socodka howlaha guddiyada iyo dhaqangelinta Roadmapka.
Sidoo kale, Ra?iisul Wasaaruhu waxa uu ka hadlay xoreynta qeybo ka mid ah gobolka Galgaduud oo ay gacan ku heynteeda la wareegeen ciidaada Ahlusunna Waljamaaca oo gacan ka helaya Dowladda Itoobiya wuxuuna tilmaamay inay sii socon doonaan xoreynta dhamaaba degaanada dalka ee ay gacanta ku hayaan kooxaha Argagixisada ku dabaan ee Al shabaab.
Dhinaca kale, Ra?iisul Wasaaruhu waxa uu la kulmay wefdi sare oo ka socday midowga Yurub kuwaasoo ay ka mid ahaayeen Nic Westcott Agaasimaha guud ee qeybta Africa ee Midowga Yurub, Alexander Rondes Ergeyga gaarka ah ee Midowga Yurub Geeska Afrika, iyo George Mark Andrea madaxa qeybta Soomaaliya ee midowga Yurub waxayna dhinacyadu ka wada hadleen qodbo badan oo ay ka mid ahaayeen in shirkii London kadib in ay qiimeeyaan arrimaha Roadmapka iyo sida uu u dhaqangalay, sidii loo soo afjari lahaa Xilliga kala guurka, sidii AMISOM iyo ciidamada qalabka sida ay ugu amaani lahaayeen xisilinta iyo xoreynta dalka, iyo sidii gobolada laga xoreeyo kooxaha Xagjirka ah sidii looga abuuri jawi nabadeed loogana saacidi lahaa in dib loo soo celiyo adeegyadii bulshada.
Xigasho: Xafiiska R/wasaaraha